Establishment of Isreal - Land Of Punt
Bariga Dhexe kadib Boqortooyadii Cusmaaniyiinta
“Boqortooyada Yuhuudda” waa erey siyaasadeed oo lagu sharaxayo waddanka reer binu Israa’iil, oo ah waddankii ay ku yaalliin dadka Yuhuudda ah, laakiin adeegsiga diineed ee ka dhexeeya adeegsiga cilmiga ee ereyga iyo macnaha laga soo reebi karo ayaa laga dooday tan iyo aasaaskii Israa’iil 1948.
Qeex isla markaana sharax “Qaranka Yuhuudda”
QODOBBADA MUHIIMKA AH Tan iyo dabayaaqadii qarnigii 19aad markii ay soo kordheen kacdoonkii Yuhuuda, waxaa jiray hirarka hijrada ee yuhuudu u gudubtay Falastiin, laakiin intii lagu gudajiray WWII iyo Holocaust, deg degga ah ee socdaalka Yahuudda ee ka baxa Yurub ayaa sare u qaaday khilaaf iyo xadka loo saaray soogalootiga Yahuudda ee Falastiin sanadkii 1939.Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib, Boqortooyada Midowday waxay isku aragtay khilaaf ba’an oo dhex maray bulshada Yuhuuda ee ku saabsan soogalootiga, iyo sidoo kale iskahorimaadka joogtada ah ee bulshada Arab.Noofambar 29, 1947, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu qaatay Qorshe Qayb ah oo ku Saabsan Falalka Muhiimka ah ee Falastiin, kaas oo ay diideen Falastiiniyiinta waxayna dhalisay dagaal sokeeye.
Bishii Meey 14, 1948, maalin ka hor dhicitaankii waajibka Boqortooyada Ingiriiska, David Ben-Gurion, oo ah Madaxa Hay’adda Yuhuudda, wuxuu ku dhawaaqay “aasaaska dowlad Yuhuudda ee ka jirta Eretz-Israel, oo loogu magac daray Dowladdii Israa’iil. ”Maalintii xigtay, ciidammada afarta waddan ee carabta – Masar, Suuriya, Transjordan, iyo Ciraaq – waxay galeen wixii la oran jiray Ingiriiska qasab ahaan Falastiin, waxay bilaabeen dagaalkii 1948 ee Carab-Israel kaasoo socday hal sano illaa xabbad-joojin.Ereyga “Yuhuudda Yuhuudda” wuxuu adeegsan jiray warbaahinta dhexdeeda tan iyo markii la aasaasay Israa’il, ereyganna waxaa loo adeegsaday iswaydaarsiga Israel.SHURUUDAHA MUHIIMKA AH “Eretz-Israel” Magaca caanka ah ee Yuhuudda ee dhul ballaarinta juquraafiyeedka aan xadidnayn ee Koonfurta Levant. Erayada la xiriira ee kitaabiga ah, kuwa diinta, iyo taariikhiga ah ee Ingiriisiga waxaa ka mid ah Dhulkii Kancaan, dhulkii loo ballanqaaday, Dhulkii Quduuska ahaa, iyo Falastiin.
Shuruucda NurembergShuruucda lidka ku ah naceybka ee Nazi Jarmalka ayaa soo saartay Sebtember 15, 1935, Reichstagna shir gaar ah oo lagu qabtay Nuremberg Rally of the Nazi Party (NSDAP). Labada sharci waxay ahaayeen Sharciga Ilaalinta Dhiiga Jarmalka iyo Maamuuska Jarmalka, kaasoo mamnuucaya guurka iyo galmada aan caadiga ahayn ee u dhaxaysa Yuhuudda iyo Jarmalka iyo shaqaalaynta haweenka Jarmalka ee da’doodu ka yar tahay 45 sano ee qoysaska Yuhuudda ah, iyo Sharciga Dhalashada ee Dhalashada, kaasoo cadeeyay in kuwa Jarmalka ama dhiigga la xiriira ayaa u qalma inay noqdaan muwaaddin Reich. Inta soo hartay waxaa loo kala saaray inay yihiin maadooyin dowladeed, iyadoo aan la helin xuquuqdooda muwaadinnimo.David Ben-GurionAasaasihii asaasiga u ahaa Gobolka Israel iyo Raiisel wasaarihii ugu horreeyay ee Israa’iil.
Bishii Meey 14, 1948, wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay aasaasida Dawladdii Israail wuxuuna ahaa kii ugu horreeyay ee saxeexa Bayaanka Israel ee Xornimada, taas oo uu ka caawiyay qorista. Wuxuu hogaaminayay Israel intii lagu guda jiray Dagaalkii Carab-Israel 1948 wuxuuna mideeyey maliishiyaad kala duwan oo Yuhuuda ah kana mid ahaa Ciidanka Difaaca Israel (IDF). Dabadeedna, waxaa loo yiqiin “aabihii aasaaska Israa’iil.”Aasaaskii Reer Binu Israa’iilSanadkii 1933, Hitler wuxuu xukunka la wareegay Jarmalka, iyo 1935 qaanuunka Nuremberg wuxuu sameeyay Yahuudda Jarmalka (iyo markii dambe Austrian iyo Czech Yuhuud) qaxooti aan wadan. Xeerar la mid ah ayaa waxaa adeegsaday xulafada badan ee Nazi ee Yurub. Kobcinta xigay ee socdaalka yuhuuda iyo saamaynta dacaayaddii Nazi ee loogu tala galay dunida carabta ayaa horseeday kacdoonkii carabta ee 1936-1939 ee Falastiin. Britain waxay aasaastay guddiga ‘Peel’ si ay u baaraan xaalada. Guddigu ma tixgelin xaaladda Yuhuudda ee Yurub, laakiin waxay ku baaqeen in la helo xal laba-dowladeed iyo wareejinta khasabka ah ee dadka. Ingiriiska ayaa diiday xalkaas oo taa bedelkeed waxay hirgalisay waraaqda Cad ee 1939. Tani waxay qorsheyneysay inay soo afjarto socdaalka Yahuudda illaa 1944 una ogolaato in aan ka badnayn 75,000 oo muhaajiriin yuhuud ah.
Tani waxay musiibo ku noqotay Yuhuuddii reer yurub, kuwaas oo horeyba si xun loola takooray oo u baahnaa magangal.Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Aduunka, sida naxdinta leh ee xasuuqii Holocaust loo yaqaanay, hogaankii Jabhaduhu wuxuu dejiyay Qorshaha Hal Milyan, hoos udhacii bartilmaameedka hore ee Ben-Gurion ee ahaa laba milyan oo soogalooti. Dhamaadkii dagaalka, mowjad ballaaran oo Yuhuudi bilaa dal ah, oo badidoodu badbaadeen Holocaust, waxay bilaabeen inay u haajiraan Falastiin doonyo yaryar iyagoo ku xadgudbaya qawaaniinta Ingiriiska. Holocaust wuxuu midoobey inta badan bulshada inteeda kale ee Yuhuuda ah ee ka dambeysa mashruuca Siinayk. Ingiriisku wuxuu midkood ku xirey Yahuudda Qubrus ama wuxuu u diray aagagga ay ka taliso Ingiriiska ee ay Al-shabaab gacanta ku hayaan ee Jarmalka. Boqortooyada Ingiriiska, waxay la kulantay kacdoonkii Carab ee 1936-1939 ee ka dhanka ah soogalootiga Yuhuuda ee soo galay Falastiin, waxay hadda la kulmayeen mucaarad ay ka soo horjeedaan kooxaha reer Falastiin ee falastiiniyiinta xayiraadihii xigay.Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib, Boqortooyada Midowday waxay isku aragtay khilaaf ba’an oo dhex maray bulshada Yuhuuda ee ku saabsan xadka soogalootiga Yahuudda, iyo sidoo kale iskahorimaadka joogtada ah ee bulshada Arabka ee ku aadan heerarka xadka.
Xanaaneh, oo ah urur ka tirsan milatariga Yuhuudda, wuxuu diyaariyay halgan hubaysan oo looga soo horjeedo xukunkii Ingiriiska.Bishii Nofeembar 29, 1947, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu qaatay qorshe Qayb ah oo ku Saabsan Muhiimka Falastiin. Xuduudahani waxay cayimeen xuduudaha dawladaha carabta iyo Yuhuudda cusub iyo aagga Qudus oo ay UN ka maamuli doonto iyada oo la raacayo nidaam caalami ah. Dhamaadka waajibka Boqortooyada Ingiriiska ee Falastiin waxaa la dejiyay saqdii dhexe ee May 14, 1948, laakiin Falastiiniyiinta ayaa diiday qorshahaas.Markay ahayd Disember 1, 1947, Gudiga Sare ee Carbeed waxay ku dhawaaqeen shaqo joojin sedex maalmood ah, iyo burcadda carabta ay bilaabeen inay weeraraan bartilmaameedyada Yuhuuda.
Yuhuuddu waxay markii hore difaaca ahaayeen markii dagaal sokeeye qarxay, laakiin horraantii bishii Abriil 1948 waxay u dhaqaaqeen dhanka weerarka. Dhaqaalaha Reer Falastiin ee Reer Falastiin ayaa burburay 250,000 oo reer Falastiin ah ayaa cararay ama la masaafuriyey.Bishii Meey 14, 1948, maalin ka hor dhicitaankii waajibka Boqortooyada Ingiriiska, David Ben-Gurion, oo ah Madaxa Hay’adda Yuhuudda, wuxuu ku dhawaaqay “aasaaska dowlad Yuhuudda ee ka jirta Eretz-Israel, oo loogu magac daray Dowladdii Israa’iil. ” Tixraaca kaliya ee qoraalka Bayaanka ee xuduudaha dowlada cusub waa isticmaalka erayga Eretz-Israel (“Dhulka Israa’iil”).
Baaqa Gobolka Israel David Ben-Gurion oo ku dhawaaqaya Baaqa Israel ee Madax-bannaanida ee Maajo 14, 1948.Maalintii xigtay, ciidammada afarta waddan ee carabta – Masar, Suuriya, Transjordan, iyo Ciraaq – waxay galeen wixii ka dambeeyay Falastiin qasab ku ahayd Falastiin, iyagoo bilaabay dagaalkii 1948-kii-Israel. Qabiil ka yimid Yemen, Morocco, Saudi Arabia iyo Sudan ayaa iyaguna ku soo biiray dagaalka. Ujeedada duulaanka ayaa ahaa in laga hortago abuuritaanka dowladdii Yahuudda markii la bilaabay, waxaana qaar ka mid ah hogaamiyaasha carbeed ay kahadleen sidii Yahuudda loogu qaadi lahaa badda.
Sida uu sheegayo Benny Morris, Yuhuuddu waxay dareemeen in ciidamada soo duulay ee Carabtu ay ku talo jiraan inay gawracaan Yuhuudda. Jaamacadda Carabtu waxay sheegtey in duulaankaasi yahay soo celinta sharciga iyo kala dambeynta iyo ka hortagga dhiig kale oo daadiya.Sannad dagaal ah kadib, xabbad-joojin ayaa la dhawaaqay waxaana la sameeyay xuduudo ku meel gaar ah, oo loo yaqaan Khadka Cagaaran. Jordan waxa ay dib u dhigtay waxa loo yaqaanay Daanta Galbeed, oo ay ku jirto Bariga Qudus, iyo Masar oo la wareegeen marinka Qaza. Qaramada Midoobey waxay ku qiyaastay in kabadan 700,000 oo reer Falastiin ah in laga eryay ama laga cararay kororkii ciidamada Israel inta lagu gudajiray iskahorimaadka — waxa caan ku noqon doona Carabiga sida Nakba (“musiibo”).
Wadanka Yuhuuda“Wadanka Yuhuuda” waa erey siyaasadeed oo lagu sharaxo wadanka reer binu Israa’iil. Dawladdii Israa’iil waxay ku qeexday ku dhawaaqisteeda madax-bannaani inay tahay “dowlad Yahuud ah,” erey u muuqday go’aankii qeyb ka ahaa Qarmada Midoobay 1947 ereygu wuxuu ku jiray adeegsiga guud ee warbaahinta tan iyo markii la aasaasay Israel waxaana loo adeegsaday isweydaarsi. la Israa’iil.Tan iyo markii la aasaasay, Israa’iil waxay meel marisay sharciyo badan oo ka tarjumaya aqoonsiga Yuhuudda iyo qiyamka aqlabiyadda (qiyaastii 75% sanadkii 2016) ee muwaadiniinteeda. Si kastaba ha noqotee, doodda diiniga ah iyo tan diineed ee Israaiil gaar ahaan waxay diirada saartay dood ku saabsan nooca Yuhuudda ee gobolka.
Dhinac kale oo ka mid ah dooddu waa xaaladda dadka laga tirada badan yahay ee Israa’iil, gaar ahaan dadka reer Israel ee carbeed.Israa’iil dhexdeeda waxaa ka socday dood ku saabsan in gobolku uu aqoonsan yahay dhaqan badan oo Yuhuudi ah, kuna dhiirrigeliyo diinta Yuhuudda ee iskuulada, iyo in la xakameeyo qawaaniinta qaarkood ee Kashrut iyo Shabbat. Dooddani waxay ka tarjumaysaa kala qaybsanaan taariikhi ah oo dhex martay Zionism iyo muwaadiniinta Yuhuuda ah ee reer binu Israa’iil, kuwaas oo leh cilmaaniyo waaweyn iyo dhaqan / Orthodox laga tirada badan yahay iyo sidoo kale aqlabiyad meel udhaxeysa.Nidaamka ‘Zionism’, oo ah qulqulatada taariikhiga ah, ayaa asal u ah fikirka Yahuudda sida dad xaq u leh go’aan-ka-gaarista, iyo inay yeeshaan waddan ay ka baqayaan weerarada ka soo horjeedda lidka ku ah nabadda iyo inay ku noolaadaan nabad.Fikradda ah in Israa’iil lagu sameeyo magaca oo ay xidhiidh joogto ah la yeelato koox dad ah, oo ah Yuhuudda, ayaa muran badan ka dhalisay kooxaha laga tirada badan yahay ee ku nool Israa’iil – tirada badan ee muslimiinta iyo Masiixiyiinta reer Falastiin.
deganaanshaha Israa’iil iyo, illaa xadka dhulkaas loo sheegto in lagu xukumo inay ka mid tahay Israa’iil oo aan ahayn aagagga ay ku sugan yihiin militariga, Daanta Galbeed iyo Gaza. Tusaale ahaan heesta caanka ah ee Israel, Hatikvah, waxaa loola jeedaa magaca yuhuudda iyo sidoo kale tixraaca fikradda Siinis, mana ku xuso dhaqanka carabta ee Falastiin. Sidaa darteed heestaani waxay dadka aan Yuhuudda ahayn ka saaraysaa sheekadeeda astaan qaran. Dhaleeceyn la mid ah ayaa laga sameeyay calanka Israa’iil oo u eg tan Tallit (shaarka Yuhuudda ee salaadda) oo leh astaamaha David, caalami ahaan loo aqoonsan yahay inay calaamad u tahay diinta Yuhuudda. Dadka dhaleeceeya Israa’iil oo ah waddan Yuhuudi ah, gaar ahaan dowlad qaran, waxay soo jeediyeen in la qaato sumad loo dhan yahay oo dhexdhexaad ah.